Ny Sweden dia firenena tsy mandeha miala sasatra sy masoandro mamirapiratra. Saingy azo lazaina hoe mpanjakavavin'ny tendrombohitra izy io, noho ny zavatra iray, ary be dia be izy ireo.
Inona ireo tendrombohitra any Soeda?
Ny lisitry ny tendrombohitr'i Soeda malaza indrindra, ny haavony mihoatra ny marika 2000 m, dia aseho etsy ambany:
Kebnekaise (Kebnekaise) - tendrombohitra avo indrindra any Soeda, any Lapland, akaikin'ny Faribolan-tendrontany Arktika. Kebnecaise dia misy tampony 2: ny atsimo - misy haavon'ny 2106 m sy ny avaratra - 2097 m. Ireo mpizaha tany toa an'ity toerana ity ho an'ny lalana maro napetraka ho eny an-tampony. Amin'izao fotoana izao, ny haavon'ny tendrony atsimo dia mihena tsikelikely noho ny firotsahan'ny ranomandry izay mandrakotra azy.
Sarekchokko (Sarektjåkkå) no tendrombohitra avo faharoa any Soeda. Ao amin'ny faritr'i Norrbotten, any amin'ny Valan-javaboahary Sarek izy io . Ny tendrombohitra dia misy tampony 4 (Sturtoppen-2089 m, Nurdtoppen - 2056 m, Sidtoppen - 2023 m ary Bukttoppen - 2010 m). Ny fiakarana an-tampon'ny Sarechkokko dia heverina ho iray amin'ireo lalana lava indrindra sy sarotra indrindra eto amin'ny firenena.
Kaskasapakte no lohan'ny telo amin'ireo tendrombohitra avo indrindra any Soeda. Ny haavony dia 2,043 m. Ny tendrombohitra dia hita any Lapland, akaikin'i Kebnecaise. Ny tongotry ny Cascasapakte dia voaravaka amin'ny farihy Tarfala.
Akka (Akka) dia tendrombohitra tampon'ny havoanan'i Jokmokk. It is part of the National Park Stora-Shefallet . Ny tendrony avo indrindra amin'ny tendrombohitra dia manodidina ny 2015 m ambonin'ny ambony ranomasina. Ny mponin'i Lapland Akka dia heverina ho toerana masina, izay andian-taranaka marobe. Any akaikin'ny tendrombohitra no fitobiam-be lehibe indrindra ao amin'ny firenena - Akkavre.
Matetika ny mpitsidika dia manontany tena raha misy volkano any Soeda. Ny valiny dia: na dia eo aza ny tendrombohitra maro, avo be sy tsy avo, dia tsy misy volkano any amin'ny faritry ny firenena.
Inona no havoaka any Letonia?
Fitaterana any Sipra
Fialantsasatra any Islandy
Toerana misy an'i Slovenia
Ny fahitana an'i Sipra
Monuments of Sweden
Koba masira ho an'ny boay
Takona sandoka amin'ny tanana manokana
Ahoana ny fomba hanasana akanjo?
Curd ao amin'ny multifariate
Inona no mampidi-doza kokoa noho ny labiera na vodka?
20 saka sy alika, izay tsy azo ravana amin'ny fijerena televiziona!
Fanomezana ho an'ny zaza vao teraka
Karakarao ny zaza vao teraka ao amin'ny hopitaly
Ireo akanjo ho an'ny Halloween ho an'ny ankizy amin'ny tanany manokana
Boky izay mampivoatra ny teny sy ny voambolana
Dentistry ho an'ny stomatitis amin'ny olon-dehibe
Karatra Paska miaraka amin'ny ankizy
Fanesorana ny uterus sy ny ovaires
Trends of Winter 2016-2017